उपदेशक7ERV-NE - बुद्धि र - Bible Gateway
बुद्धि र शिक्षाको सूची
7 एउटा असल नाम हुनु सुगन्धित अत्तर भन्दा राम्रो हो।
मृत्यु दिवस जन्म दिन भन्दा उत्तम हो।
2 भोजको घरमा जानु भन्दा मलामी जानु असल हो।
किनकि सबै एक दिन मर्नै पर्छ,
अनि हरेक जीवित प्राणीले यो सम्झनु पर्छ।
3 हाँसो भन्दा शोक र सुर्ता राम्रो हो,
किनकि जब हाम्रो अनुहारमा विषाद छाउँछ तब हाम्रो हृदय कंन्चन बन्छ।
4 ज्ञानीले सधैँ मृत्युबारे सोच्छ
तर मूर्खले रमाइला दिनहरू सम्झन्छ।
5 मूर्खबाट प्रशंसा पाउनु भन्दा,
ज्ञानीबाट निन्दित हुनु धेरै राम्रो।
6 मूर्खहरूको हाँसो त बेकार हुन्छ,
काँढाको आगो बालेर भाँडा तताए जस्तो हो।
काँढाको आगो छिट्टै बल्छ,
तर भाँडा तात्दैन।
7 घुसले ज्ञानी मानिस भ्रष्ट हुन्छ,
अनि पैसाको उपहारले उसको हृदयलाई बिगारिदिन्छ।
8 शुरू गरेको भन्दा अन्त गरेकै राम्रोहो।
अहंकारी को अधीनमा बस्नुभन्दा नम्र र धीरज भएकै राम्रो।
9 छिटै रीसाउने नगर,
किनकि रीसाहा बन्नु मूर्खता हो।
10 नभन, “बितेका दिनहरूमा के भयो।
तब चीजहरू अझ राम्रा थिए।”
यस्तो प्रश्न गर्नु ज्ञानको कुरो होइन।
11 जसरी धनी हुनु राम्रो हो त्यसरी नै ज्ञान हुनु पनि राम्रो हो। विवेक ती जो कोही जीउनेहरूको निम्ति श्रेष्ठता हो। 12 धनी हुनु भन्दा ज्ञानी हुनु राम्रो हो। जीउँदो मानिसको लागि ज्ञान लाभदायक हो।
13 परमेश्वरद्वारा सृजित वस्तुहरू हेर। यदि परमेश्वरले केही कुरा बाङ्गो बनाउनु भएको छ भने तिमीले त्यसलाई सोझो बनाउन सक्ने छैनौ। 14 जब जीवन उत्तम छ भने त्यसबाट आनन्द लेऊ। तर जीवन कठिन छ भने याद गर परमेश्वरले हामीलाई कठिन समय पनि दिन्छन् र असल समय पनि दिन्छन्। अनि भोलि के हुन्छ त्यो कसैले जान्दैन।
मानिस साँच्चै असल हुँदैनन्
15 आफ्नो छोटो जीवनमा मैले सबैथोक देखेको छु। मैले देखेको छु राम्रा मानिस उमेरमा नै मर्छन् र मैले देखेको छु दुष्ट मानिस लामो आयु बाँच्छन्। 16-17 यसकारण आफैंलाई किन मार्छौ? साह्रै राम्रो पनि नबन। साह्रै खराब पनि नबन। अनि साह्रै बुद्धिमानी पनि नबन, साह्रै मूर्ख पनि नबन। समय नपुगी किन मर्छौ?
18 अलिकति यस्तो बन, अलिकति उस्तो। परमेश्वरका अनुयायीहरूले पनि केही राम्रो काम गर्छन् केही नराम्रो। 19-20 ज्ञानले मानिसलाई शक्ति दिन्छ, एउटा ज्ञानी मानिस शहरभित्र दशजना शासकहरू भन्दा शक्तिशाली हुन्छ। वास्तवमा यस संसारमा कोही असल मानिस छैन जसले असल कुरा मात्र गर्छ र दुष्ट काम कहिले गर्दैन।
21 मानिसहरूले भनेका सबै कुरा नसुन तिम्रो आफ्नै नोकरले पनि तिमी बारे नराम्रो कुरा गर्नसक्छ। 22 अनि तिमी जान्दछौ, तिमी आफैंले पनि अरूहरूका बारेमा नराम्रो कुरा गरेका छौ।
23 यी सबै कुराको बारेमा मैले आफ्नो बुद्धि र विचार लगाएँ। म साँच्चिकै बुद्धिमान बन्न खोजें तर त्यो असम्भव थियो। 24 किन म बुझ्न सक्दिनँ आखिर कुरो त्यही छ। जस्तो त्यो छ! कसैलाई पनि यो बुझ्न कठिन छ। 25 साँच्चो ज्ञान पाउन मैले ठूलो परिश्रम र गहिरो अध्ययन गरें, हरेक कुराको कारण पत्तो लाउने चेष्टा गरें तर मैले जानें के?
मैले यतिनै जाने कि दुष्ट बन्नु मूर्खता हो र मूर्ख व्यवहार गर्नु पागलपन हो। 26 मैले यो पनि देखे कि कतिपय स्त्रीहरू धराप जस्तै खतरनाक हुन्छन्। तिनका हृदय जाल जस्ता र तिनका पाखुरा साङ्गला जस्ता हुन्छन्। त्यस्ता स्त्रीहरूका फन्दामा पर्नुभन्दा मर्नु निको। परमेश्वरका अनुयायी त्यस्ता स्त्रीहरूदेखि भाग्छन्। तर पापी तिनको फन्दामा पर्छ।
27-28 उपदेशक भन्छन्, “मैले यी सब प्रश्नहरू एक साथ राखें अनि तिनीहरूको उत्तर खोजी गरें। उत्तर अझै खोजिरहेकोछु तर यति चाँहि जाने कि हजारमा एकजना साँच्चो पुरूष मैले पाएँ, तर साँचो नारी एउटै पनि पाइँन।
29 “अर्को एउटा कुरो पनि बुझें परमेश्वरले मनुष्यलाई राम्रो बनाउनु भएको थियो। तर मानिसहरू आफैंले अनेकौं छलहरू बनाए।”